Umbiko kaZondo: Eseziwelile zibonakala ngodaka emanqineni - Bayede News
by nguSwelihle Buthelezi
IGhana izomangaza abaningi – Osei Kuffor
Ikhalenda lepolitiki yaseNingizimu Afrika liqale ngegiya eliphezulu. Ngosuku lokuqala onyakeni kulothiswe uSobaba uMpilo Tutu nobesangomunye wabayingcosana besizukulwane somzabalazo. Kuthe izwe lisakhokha umoya kulokho mhla zimbili kuye uMasinga kwenzeka umuga wokusha kwePhalamende. Umlilo lona udonse kwaze kwaba ngusuku lwesithathu. Okuthe ngelesine uMehluleli uZondo wethula ngokusemthethweni kuMengamelu umbiko ofuthse izwe kakhulu ngalokho okusavelile.
Ngaphandle kwesinqumo sokuba kushushiswe abathile okuvela ukuthi baba nesandla ezenzweni zenkohlakalo ngokuchaza koMbiko weKhomishini ebiPhenya Ngezinsolo zokukuGwamandwa Kombuso, umbiko ubuye waveza nokuthi iqembu elibusayo lahlomula enkohlakalweni eyayenzeka ngoba lalingene ngesandla nesiphanga.
Ngesikhathi sokuqhubeka kwezigcawu zokwethula ubufakazi uKhongolose ubumi kwelokuthi, wona awukho ecaleni. Umbiko wokuqala uveze okwehlukile ngokuthi leli qembu lwaluxhaphaza kanjani uhlelo lwamathenda lukahulumeni ukuze luzuze kanye nalabo abasondelene nalo.
“Kufikisela ngamahloni ukuthi ubufakazi obethulwa kwiKhomishini baveza ukuxhumana ngenkohlakalo yokukhishwa kwamathenda nokusekwa ngezimali kwe-ANC,” kuveza ingxenye yombiko eqhuba ithi lokhu nje kukodwa kuyingozi enkulu kudemokhrasi yakuleli ngoba amaqembu ezepolitiki kumele azimele.
USihlalo weKhomishini uMehluleli uZondo ubuye waphakamisa nokuthi kuchitshiyelwe imithetho ethize engokusebenza kwezinkampani zikahulumeni ukuze lesi sihlava singaphinde senzeke.
Engxenyeni yokuqala yombiko odluliselwe kuMengameli ngoLwesibili, uMehluleli uZondo uthi omunye umthetho athi kumele uchitshiyelwe iSars Act. Uthi ukuchitshiyelwa kwalo mthetho kungasiza ekunqandeni ukuphendulwa kwezinkampani zikaHulumeni kwaMachanca kwampunzedlemini.
Sekungumlando ukuthi sezizonke izindleko zeKhomishini ebiphenya ngokuGwamandwa Kwamandla Ombuso umsebenzi wayo othathe iminyaka emine zifinyelele esigidi-1. Kuthe uRamaphosa eqeda nje ukwamukela umbiko, yabe isiqalile imvunge esizweni. Kukhona abaveza ukuthi izinkampani kanye nalabo abavela njengababe nesandla ezenzweni zenkohlakalo kulo mbiko, nakanjani kumele bashushiswe ngoba inhloso yokusungulwa kwayo kwabe kungukuthi ivumbulule konke okwakwenzeka okwakuphambene nomthetho.
Amagama amadl’egwavuma nabakhaphi
Zisuka nje ebhandeni umbiko wokuqala udalule amagama ezikhulu ezithile okuthiwa kumele zibhekane namacala obugebengu. Kulezi zikhulu kukhona owayesikhulu esiphezulu kwaTransnet uMnu uBrian Molefe, owayeyisikhulu esiphezulu kwaSouth African Airways (SAA), uMnu uCollon Matjila, uMnu uTom Moyane owayeyisikhulu sakwaSouth Afican Revenue Services (SARS), uMnu uTony Gupta, owayenguSihlalo weBhodi yakwaSAA uNks uDudu Myeni noMnu uMzwanele Mannyi.
UMnu uGupta umbiko uphakamisa ukuthi abhekane nokushushiswa ngamacala obugebengu ngokuphula umthetho iPublic Finance Management Act, ngokuba nezinkontileka ezazingekho emthethweni nephephandaba iThe New Age. Umbiko weKhomishini uthole ukuthi owayenguMengameli uMnu uZuma wenza umonakalo omkhulu ngesikhathu ekhipha esikhundleni uMnu uThemba Maseko njengesikhulu esiphezulu kwezokuxhumana kuhulumeni efaka uMnu uMzwanele Manyi. Umbiko uthi uZuma wayesenga ezimithiyo ngesikhathi efakaza ngokwenzeka okwaholela ekuxoshweni kukaMaseko.
Kulo mbiko usolwa ngokutshela owayenguNgqongqoshe eHhovisi likaMengameli ongasekho uCollins Chabane ukuba asuse uMaseko esikhundleni ukuze kungene uManyi. Esengenile uManyi akapholisanga maseko wakhokha izizumbulu ephephandabeni labakwaGupta iNew Age.
Umbiko uthi ukususwa kukaMaseko kwaholela ekusungulweni kweKhomishini. Ingxenye yokuqala iphinde ibheke kabanzi ngeqahaza likaMoyane kwaSars njengoba kuvela ukuthi ngesikhathi ephethe le nkampani kahulumeni yalahlekelwa abasebenzi abaningi ababeqeqeshiwe, izimeneja ezisezingeni eliphezulu nabaphenyi. Kulo mbiko kunamakhasi angama-87 akhuluma ngqo ngoMoyane nokugwamandwa kukaSars. Ehlanganisa umbiko uMehluleli uZondo usebenzise ubufakazi bukaMoyane nowangumsebenzi wenkampani iBain & Company u-Athol Williams owayenikezwe umsebenzi wokucubungula inkontileka yale femu nokunyathela kukaSars uma sekuziwa ngakuyona. Ubuye wathembela kakhulu ebufakazini bukaMnu uVlok Symington noMnu uJohann van Loggerenberg ababengabasebenzi bakwaSars. UZondo kulombiko ubatuse kakhulu laba ikakhulukazi uWilliams, athi wakwazi ukumela iqiniso noma ngabe wayelandelwa ngapha nangapha iBain & Company ifuna ukumgwazela.
UZondo uthole ukuthi uMoyane nowayenguMengameli uZuma baba neqhaza elingakanani ekugwamandeni uSars. Ngokombiko uZuma wathembisa uMoyane isikhundla sikaKhomishana wakwaSars ingakenziwa ngisho nenhlolokhono. Okwenza ukuthi uSars ube sekhaleni lokuhwamandwa kombuso yingoba uphiko lokuphenya nokusetshenziswa komthetho lwalusendleleni yalabo abangene ntshi ebugebengwini obuhleliwe. Ngokombiko uSars wadonselwa ezibini wathenwa amandla ngazo zonke izindlela ukuze usetshenziswe kalula kuphinde kwenziwe nezinguquko eziphuthumayo ezazizovuna amandl’egwavuma. UMoyane wakhonjwa indlela kwaSars ngowezi-2018 emuva kweminyaka emine.
Embikweni kuvela ukuthi uZuma noMoyane bahlangana nenkampani iBain & Company ukuze kuhlelwe ukuthi uSars wawuzophanjaniselwa kanjani engakaqashwa nokuqashwa uMoyane. Lolu chungechunge lwemihlangani lwaholela ekutheni iBain igixabezwe ngethenda ukuze kuhlelwe kabusha uSars. UZondo uphakamise ukuthi ukuhlangana kwabo ukuze kuhlukaniswe uSars abantu baseNingizimu Afrika bengakaboni lutho olukhulu olwaluzolandela. UZondo uthi inhloso yezi nguquko nokuqashwa kwabantu isigubhukane kwakwenzelwa ukuthi kuhlelwe izinhlelo zokuba kuthathwe yonke imali ifakwe engxenye nokuthi uSars ulawulwe ngabathile. UZondo uphakamise ukuthi zonke izinkontileka zenkampani iBain’s neminyango kahulumeni zibuyekezwe, amaphoyisa enze uphenyo kuthi noPhiko Lwezokushushisa lubheke ukuthi abekho yini abangashushiswa. Uphinde waphakamisa ukuthi iSars Act kumele uchitshiyelwe ukuze kube nobulungiswa futhi nohlelo lonke luvuleleke uma kuzoqashwa ukhomishana.
Enye ingxenye yombiko iphinde ikhulume ngokugwamandwa kombuso okuthinta iPremedia Broadcasting. Lapha umbiko ugcizelela ukuthi izinkontileka zakwaGupta kumele zibuyekezwe. UMolefe noMatjila umbiko uphakamisa ukuthi baphenywe abezomthetho Laba bobabili ngokombiko bethula uxhaso okwakuzobanjiswana kulo, benza sengathi abakwaGupta kukhona abakufakile kulolo xhaso okwabe kungelona. UZondo uthi kungakuhle ukuthi abezomthetho babeke amacala lamadoda ukuze kube yisifundo nangesikhathi esizayo.
nguSwelihle Buthelezi Jan 5, 2022